Tababaraha Kooxda Girona Oo Fariin Hanjabaad Ah U Soo Diray Real Ka Hor Kulanka Caawa Ee La Liga %
Tababaraha kooxda kubada cagta Girona, ninka lagu magacaabo Pablo Machin, ayaa wuxuu sheegayaa in naadigiisa aysan ka baqeen qofna, ayna isku soo diyaariyeen inay wajahaan Real Madrid, xili lagu ciyaarayo garoonka Santiago Bernabeu.
Kooxda ka dhisan Gobolka Catalonia Catalan, ayaa taariikh kusoo dhigtay naadiga Real Madrid, kulankii koowaad ee fasal ciyaareedkan, markaasoo ay gurigooda kusoo dhaweeyeen Los Blancos, waxaana waqtigaas lagu soo dhar-baaxay Madrid 2-1.
Hadda waxay kaga jiraan shaxda kala horeynta ee La Liga, kaalinta Todobaad iyadoona umuuqda kuwa usoo bixi kara sanad ciyaareedkan markoodii ugu horeysay koobka xiisaha leh ee Europa League, maadaama sanad ciyaareed fiican ay ku jiraan.
“Qofna kama baqeynao inaga, xitaa Real Madrid,” ayuu Machin yiri ka hor kulanka caawa – Isagoona intaas ku daray: “Laakiin Haa, waxaan usameyn doonaa xishmad, waxayna noo tahay dhiiro-gelin badan inaan iyaga la dheelno.
“Madrid waxay ku jiraa bandhigeeda Isbuucyadii udambeeyay – Lamberada uu Cristiano Ronaldo dhigayo ayaa ah wax cajiib ah, laakiin waxay kaloo haystaan ciyaaryahano kale, kuwaaso isbedal sameyn karta,” ayuu sii daba dhigay.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan noqono kuwa tartan fiican muujiya, ma noqon doono kuwa raaxo dareema inta uu kulanka socdo, sidaas darteeda kulanka illa aiyo uu ka dhamaado waa inaan loolan xoogan aan Bernabeu ku muujinaa.
“Qof walba waxa uu filayo ayaa ah inaan kala soo noqano caasimada Spain ee Madrid natiijo wax ku ool ah, sidaas darteeda waxaan diyaar unahay inaan sameyn wax walba si aan uguuleysano,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Sikastaba, Girona oo ah koox ka dhisan Gobolka Catalonia ee wadanka Spain ayaa waxay tahay mid natiijo fiican ka haysata kooxaha reer Madrid, maadaama Lixdii kulan ee ugu dambeysay oo ay la dheeshay Labo guusha heshay afarta kale ay bareejo gashay.
Geesta kale, liiska ciyaartoyda Girona ee wajahaysa Real ayaa kala ah: Gorka, Bernardo, Mojica, Ramalho, Granell, Stuani, Pere Pons, Portu, Aday, Bono, Douglas, Juanpe, Timor, Choco Lozano, Muniesa, Aleix García, Borja García and Pablo Maffeo.